Fahalalahana # Fanarahamaso : Toerana toy inona no homena ny fifampiresahan’ny kolontsaina isankarazany ao amin’ny Vovonana Erantany ho an’ny Demaokrasia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2019 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, македонски, Français
Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia – Strasbourg (Sary Marie Bohner)
Natao tao amin'ny Filankevitr'i Eoropa tao Strasbourg ny 18 hatramin'ny 25 Novambra 2015 ny Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia. Ny lohahevitra, mahakasika ireo zavamisy mivaivay taorian'ireo fanafihana tao Beiroty sy Parisy, dia ny “Fahalalahana # fanarahamaso : mba hahazoana valiny demaokratika”. Nanatrika tany isika niaraka tamin'i Suzanne Lehn sy Elise Lecamp avy amin'ny Global Voices. Indro ny topimaso fohy avy amin'ny mason'ny “fanatontoloana # fifampiresahan'ny kolontsaina isankarazany”.
Ny tena zavadehibe dia tsy ireo teboka niraisana fotsiny ihany, fa koa ny fahasamihafantsika ( ary nahafahana niresaka momba izany). Izay nandòna ahy taorian'ny andro telo nanaovana resaka an-databatra boribory sy ireo fijoroana ho vavolombelona tao Strasbourg, renivohitra eoropeàna, tao amin'ny Filankevitr'i Eoropa ho an'ny Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia. Tsy nisy na iray aza tsy nanameloka ireo fanafihana, ary nisy ny fampahatsiahivana natao fa tsy i Parisy irery ihany akory no lasibatr'ireo fanafihan'ny mpampihorohoro.
Faiza Patel est la première à intervenir #CoE_WFD : “les terroristes attendent de notre part un langage guerrier” pic.twitter.com/n008ODK1kQ
— ARTE Journal (@ARTEjournal) 18 Novembre 2015
Faiza Patel no nandray fitenenana voalohany #CoE_WFD : “miandry antsika hanao fiteninà mpiantafika ireo mpanao asa fampihorohoroana” pic.twitter.com/n008ODK1kQ
À la barbarie terroriste, nous devons opposer fermeté, solidarité et la force de nos valeurs démocratiques. #CoE_WFD pic.twitter.com/6lnSLhE9yp
— Harlem Désir (@harlemdesir) 18 Novembre 2015
Manoloana ny habibian'ny mpampihorohoro, tsy maintsy hentitra isika, miray hina ary ny tanjaky ny soataovina demaokratikantsika. #CoE_WFD pic.twitter.com/6lnSLhE9yp
Mifanome tànana ireo mpandray anjara 2.000 avy aminà firenena ampolony samihafa tafavondrona ao amin'ny Filankevitr'i Eoropa, – andry iray tena endriky ny atao hoe marimaritra -, mandritra ireo andro vitsivitsy ireo, ao anaty adihevitra, mba hahitàna teboka iombonana manodidina ny atao hoe “soatoavina”. Ny sasany mankalaza ireo « soatoavina eoropeàna », tsy arahana antsipirihany, ny ankamaroany mihodidina ny antsoina hoe « maha-erantany ny zon'olombelona », teny vohizin'ireo fihaonana.
“Je veux que nos enfants vivent dans un monde où les valeurs sont Européennes.” #CoE_WFD @EnricoLetta pic.twitter.com/MKGTu64xwK
— Rosalie SCHWANNER (@RosalieSchwannR) 20 Novembre 2015
“Tiako raha mba ao anaty tontolo iray tsy misy afa-tsy soatoavina eoropeàna no miaina ny zanatsika.” #CoE_WFD @EnricoLetta pic.twitter.com/MKGTu64xwK
— Rosalie SCHWANNER (@RosalieSchwannR) 20 Novambra 2015
Aleo ambara fa ny lohatenin'ny hetsika « Fahalalahana # Fanarahamaso » dia mametraka ny zavatra rehetra araka ny manichéisme, mampivoitra fahalalàna roa ho toy ny zavatra mifanohitra tsy afaka ny ho ampifanarahana. Ka dia tsy maintsy mifidy izay ho ankolafiny ny tsirairay. Toy izany no nahatonga ny fihorakorahan'ny ampahany tao amin'ny antenimiera an'ilay mpitsara Philippe Bilger, noho izy sahy niloa-bava, irery niatrika ny rehetra, fa « tsy olana ho azy ny hanary kely amin'izay fahalalahan'ny tenany manokana mba hahafahan'ny rehetra manana fitoniana iraisana. » Tsy misy lanjany loatra ny hoe momba sa tsy momba ny fijerin'ny Mpitsara Bilger aho. Ny zavamisy hoe nihorakorahana ny lahateniny noho izy somary tsy miray hevitra amin'ny fironana misy no mampanahy ahy, satria soritany ny fandàvana ny fahamaroam-pisainana sy ny adihevitra.
Izany no toa mampirona ahy hody miaraka amin'ny tsy fahafahampo, na tsorina hoe tena manahy tanteraka momba ity Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia ity. Ny fahaizana mitady ny marimaritra no atao hoe demaokrasia, saingy koa ny fahaizana mifanakalo hevitra. Dieny tany am-panokafana ny Vovonana, notsipihan'i Thorbjørn Jagland, sekretera jeneralin'ny Filankevitr'i Eoropa ny maha-marefo io ‘fahaizana’ io, tamin'ny fanamafisana hoe isika no voalohany mpiambina , nefa koa voalohany tomponandraikitra amin'ny fitazonana izany tsy hitsingilahila.
Soa ihany, izay tena manandanja, anatin'ny hetsika tahaka izao, toy ny nandritra ireo vovonan'ny Global Voices rahateo ihany koa, fa ireo fihaonana sy fifanakalozana fomba fijery, indraindray fifampikasohana anaty finamànana, no miforona “ivelan” ny fandaharampotoana ofisialy. Ireny fifanakalozana ireny, ireo izay mampivoitra ny fahasamihafàna, ireo izay manamafy fa isika dia olombelona sarotra takarina sy mitsinjarazara be ihany, ireny no afaka manampy hanova ny fomba fisainana, mandeha miandalana. Amin'ny famoronana ny fahafahana mifanakalo hevitra sy miady hevitra am-pahatsorana isika vao afaka mihataka kely sy mametraka ny fahatsapàna ny fihetseehampon'ny kolontsaina marolafy afaka hanampy antsika hijery izany amin'ny fomba mazava kokoa. Dia amin'izay, ary amin'izay irery ihany mihitsy, vao hisy dikany tanteraka ny Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia, ary ho re ireo teny nambaran'i Michaëlle Jean:
#CoE_WFD Le Forum mondial de la démocratie est un de ces lieux de prospective où l’avenir peut se penser et s’ébaucher
— Michaëlle Jean (@MichaelleJeanF) 18 Novembre 2015
#CoE_WFD Iray amin'ireo toerana natao hibanjinana ny hoavy ny Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia, ka ao ny hoavy ho afaka saintsainina sy sorintsoritana
— Michaëlle Jean (@MichaelleJeanF) 18 Novambra 2015